मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाको बजेट ३८ करोड ४२ लाख « Sthaniya Khabar
मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाको बजेट ३८ करोड ४२ लाख
प्रकाशित मिति : २७ असार २०७४, मंगलवार ०८:४४
बेँसीशहर (लमजुङ) । मस्र्याङ्दी गाउँपालिकाको सोमबार सम्पन्न पहिलो गाउँ सभाले गाउँ सभाबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि रु. ३८ करोड ४२ लाखको बजेटसहितको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङले गाउँ सभामा प्रस्तुत गरेको उक्त बजेटमा गाउँपालिका वित्तीय समनीकरण अनुदानतर्फ रु. १७ करोड ५७ लाख ३८ हजार, सशर्त अनुदानमा रु. ११ करोड ८४ लाख चार हजार, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समनीकरण अनुदान रु. १८ लाख १२ हजार र आन्तरिक आयतर्फ कर, सेवा शुल्क र दस्तुरसमेतबाट रु. १५ लाख उल्लेख छ ।
यस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्तातर्फ रु. सात करोड ९० लाख ३२ हजार, रजिष्ट्रेशन शुल्क बाँडफाँडबाट रु. १० लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त रु. २० लाख आय अनुमान गरिएको छ ।
गाउँ सभाबाट चालू खर्चतर्फ गाउँपालिका वित्तीय समनीकरण अनुदानतर्फ रु. चार करोड ७६ लाख, आन्तरिक आयबाट रु. २० लाख, सामाजिक सुरक्षा भत्तातर्फ रु. सात करोड ९० लाख ३२ हजार र सशर्त अनुदानतर्फ रु. १० करोड चार लाख ७० हजार व्यय अनुमान गरिएको छ ।
यसैगरी पूँजीगत खर्चतर्फ गाउँपालिका वित्तीय समनीकरण अनुदानतर्फ रु. १३ करोड ४७ लाख ५० हजार, आन्तरिक आयबाट रु. २५ लाख र सशर्त अनुदानतर्फ रु. एक करोड ७९ लाख ३४ हजार अनुमान गरिएको छ ।
निरन्तर वर्षाका कारण जिल्लाका ग्रामीण सडकमा यात्रुले सास्ती पाएका छन् । सदरमुकामसम्मको मुख्य सडक नै वर्षाका कारण जीर्ण बनेको छ । सडकको खाल्डाखुल्डीले होचा सवारी ठोक्किदा नोक्सानी भएको सवारीचालक बताउँछन् ।
“मुख्य सडकका खाल्डाखुल्डीमा गाडी जोगाउन मुस्किल छ,” बेँसीशहरका राजकुमार पाण्डेले भने, “कालोपत्रे सडक भनेर के भन्नु, यस्तो बिजोग सडक त कहीँ पनि नहोला ।” सदरमुकामबाट जिल्लाको पूर्व, पश्चिम र उत्तरतर्फ पुग्ने सडक झन जोखिमपूर्ण रहेका छन् । उत्तरतर्फ बेँसीशहरकै पुमा खोलामा आएको बाढीले कल्भर्ट बगाइसकेको छ । उत्तरी लमजुङतर्फ जाने सडकमा बेलौती बिसौनी र ताघ्रिङको पहिरोले पनि दैनिक दुःख दिने गरेको छ । छिनछिनमै झर्ने पहिरोले कतिबेला सडक बन्द हुने भन्ने पिरले यात्रुलाई तर्साइरहेको छ ।
सवारी नपाउँदा गाउँमा सामान ढुवानी गर्न पनि कठिनाइ भएको छ । दैनिक बेँसीशहरमा आवतजावत गर्नेहरु पनि आफ्नो गाउँ फर्किन नसक्दा एक रात बेँसीशहरमै बिताउने गरेका छन् । जिल्लाको तार्कुघाटदेखि धमिलीकुवा हुँदै बोराङ खोला, बेँसीशहरबाट घलेगाउँ हुँदै भुजुड पुग्ने सडक, बेँसीशहरबाटै काउलेपानी हुँदै नाल्मा सडक, करापुटार साल्मेभञ्ज्याड सडकमा वर्षाका कारण समस्या भएको हो ।